Mankalaza ny Halloween tsotsotra any Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2019 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, українська, Español, Português, English
Fanamian'ny “lehilahy nofohazin'ny ràn'orona tamin'ny 3 ora maraina” , ampahany amin'ny hetsika Mundane Halloween (Halloween fanaon'izao tontolo izao) isan-taona ao Japana. Pikantsary tao amin'ny YouTube.
Natao ny Alahady 27 Oktobra tao Tokyo ny Mundane Halloween tamin'ity taona ity. Ny Rakuten, ilay tranonkala fiantsenana malaza an-tserasera no nandray ny fihaonana ary nalefa mivantana tao amin'ny YouTube izany. Saika nozarain'ny olona an'arivony tao amin'ny Twitter avy hatrany, tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenirohy ( #地味ハロウィン , Jimi Halloween ) ny sarin'ireo fitafiana, ary ny tranonkala Japoney Daily Portal no namoaka ny maro tamin'ireo sary tsara indrindra. Naka tahaka am-panesoana ireo nalaza amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny fitafiana, toy ny dite tapiôka, izay niroborobo manerana an'i Japana tamin'ny fiandohan'ity fahavaratra ity.
Toa miparitaka any ivelan'i Japana ihany koa ny Halloween tsy misy mamo na tsotsotra. Mandefa sary maro be ilay mpisera Twitter @cheryll, anisan'izany ity iray manaraka ity:
Azo jerena ao amin'ny kaonty Twitter Mulboyne, bilaogera malaza ao Japana sy ao amin'ny Kotaku ny fitafiana Halloween Tsy Misy Hamamoana Japoney betsaka kokoa tamin'ny taona 2019 sy ny tamin'ireo taona hafa efa lasa.